Repacted: Nilatro Andriamatoa sy ny Oliravina Fehilamba Mena 2010 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2017 20:32 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Novambra 2010 no nivoahan'ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
Mpandray anjara tamin'ny fifaninanana Andriamatoa Sy Oliravina Hatsarana Fehilamba Mena. Sary: Repacted
Hetsika fanaovana asa soa karakarain'ny vondrona Tanora Nakuru isan-taona ny Andriamatoa sy Oliravina Fehilamba Mena, anisan'izany mpikarakara izany ny nahazo vatsy tamin'ny Rising Voices Repacted avy ao Nakuru, Kenya. Amin'ny maha hetsika fanabeazana lehibe amin'ny Andro Iraisam-pirenena iresahana Sida amin'ny 1 desambra 2010, miady amin'ny fanafoanana ny fanilikilihana sy ny fanavakavahana mikasika ny VIH / SIDA ity hetsika ity.
Tamin'ity taona ity, taorian'ny roa volana nanomanana, notontosaina ny Asabotsy 27 novambra tao amin'ny Hotel Bontana tao Nakuru ny Andriamatoa sy Oliravina Fehilamba Mena 2010. Avy amin'ny bilaogy tetikasa Repacted:
Andriamatoa sy Oliravina FEHILAMBA MENA, fifaninanana hatsaran-tarehy isan-taona misy fahasamihafana satria mampivondrona ireo olona miaina amin'ny VIH ary mifanampy mba hankalaza ny hatsaran-tarehy sy ny ady amin'ny fanilikilihana.
Nahasarika mpilatro 20 ny hetsika, 12 amin'izy ireo no misy aretina C.B.O isan-karazany ary manome fanohanana ny PLWH. Nahasarika vahiny nasaina 4 avy any ivelany ihany koa izany ka nahatratra 24 ny totalin'ny mpandray anjara.
Tany am-piandohana, mpilatro manana halavana samihafa tsy misy fetran-taona no nandray anjara, misy hatramin'ny 52 taona izy ireo ka ny tanjona lehibe indrindra dia ny hiadiana amin'ny ‘bibin'ny’ fanilikilihana amin'ny alalan'ny hatsaran-tarehy.
Mpitsara tamin'ny fifaninanana. Sary: Repacted.
Nanoratra momba ny tanjon'ny fifaninana i Collins Dennis Oduor avy ao amin'ny Repacted:
Mampisy fahatsapan-tena mikasika ireo olana samihafa mifandraika amin'ny fanilikilihana sy ny fanavakavahana ny olona mitondra ny otrikaretina VIH / SIDA, ny fiainana tsara, ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy, ny fahasalamana ara-pananahana ary ny fomba fiarovana amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo izany. Mikendry ny handrisika ny vahoaka hanao fitiliana VIH koa izany. Amin'ny maha fanamafisana ny andro manerantany iresahana SIDA, hahatratra olona 1500 ny tetikasa, handrisika azy ireo ny maha zava-dehibe ny fahafantarana ny momba azy ireo.
Hokarakaraina ao amin'ireo vondrom-piarahamonina manodidina ny tanànan'i Nakuru ny hetsika fanabeazana; Ny asa atao dia ahitana; Fihanoan'ny fiarahamonina an'ireo mpilatro, fanentanana isian'ny torohevitra sy ny fitiliana, ary atrikasa ho an'ireo mpilatro.
Aorian'ny hetsika goavana, hokarakaraina amin'ny sehatra samihafa mikendry ny vahoaka amin'ny ankapobeny ny hetsika, hijanona ho mpanolotsaina ao amin'ny vondrom-piarahamoniny tsirairay avy ireo mpandresy, ary hitarika fanentanana sy handray anjara amin'ny andro anaovana hetsika ara-pahasalamana.
Mpandresy tamin'ny fifaninanana hatsaran-tarehy Fehilamba Mena 2010: Daniel Mwangi sy Fridah Abio. Sary: Repacted.
Olona teo amin'ny 400 teo no nanatrika ny hetsika ary i Daniel Mwangi no tonga mpandresy tamin'ny Andriamatoa Fehilamba Mena ary i Fridah Abio kosa no voafidy ho Oliravina Fehilamba Mena tamin'ity taona ity. Jereo ao amin'ny bilaogin'ny Repacted ireo sary maro hafa tamin'ny hetsika.
Ity fanehoan-kevitra iray tao amin'ny Twitter momba ny hetsika:
mmocharo: attended a miss red ribbon Nakuru yesterday, a huge step in fighting stigma.
mmocharo: nanatrika ny oliravina fehilamba mena tao Nakuru omaly, dingana lehibe amin'ny ady amin'ny fanilikilihana.
Miatrika sazy am-ponja noho ny sary “vatana amin'ny lafiny tsara” ilay mpikatroka momba ny vehivavy any Rosia